Musuq maasuqa aaagasimayaasha maxaad kala socotaaa??
Sunday February 10, 2019 - 18:24:03 in Maqaallo by saleban Cilmi
Musuq maasuqa aaagasimayaasha maxaad kala socotaaa?? Musuq maasuqa aaagasimayaasha maxaad kala socotaaa??
Bismilaahi rahmani rahim,dhaman akhritaasha sharafta leh wan salamay bacda ,salaan akhriste ,maxaad kala socotaa,musuq maasuq xadhkaha goosystay oo ka dhaxeeya,agasimayaasha ,iyo isuduwaaysha gobolada?.
Waxaa ilo lagu kalsonyahy shegayaan in isuduwuhu ,usoo qoranayo ,wixi kharashaada ee markaa ku baxay ,wasarada ,gobolka ,ka shaqaysa ,tusaale ahaan gobolka saraar ama togdheer .
kadibna usoo gudbiyo agisumuhu wasaarada.
Intaas ka dib aay agisamaha ,iyo isuduwuhu ,ku heshiyaan ,in aaay galan xatoyo dadweeyne ,tasoo aad runtii ixanuunjiyey ,ina damqay . Isuduhu tusaale ,30 million o land buu qoranayaa,kadib aagisumuhu wuxuu ku darayaa 20 milllion o kale ama 30. wuxuuna kula heshinayaa,in ku daro qarashaad been abuur ah ooo aagasimaha dul saar u ah.
Sidaa daraadeed ,lacagta ,markaay wasaarada kasoo baxdo ,ee aay so gaarto ,isuduwaha heer gobol ,uu lacagtaas booliga ee hantida dadweynaha ,uu soo diro badhkiisa aaagisamaha ,hadaba wasaraada aay arrrintaasu waxaa lay xaqijiyey ,inay kadhacday wasarada degaanka , oo aan nadiif u haaystay .
Anagu cid ka cabsan maayo ,wa xatooyo dadweyne oo halis waana sun iyo waabeey lamana qarinayo. inshaALLAH,waxan saxafada somaliland ku dardarayaa,inaay arimaha siyada kaladuwan ,iyo xisbina aanay u xuslin.
saxadu caalamku ,waxaay dabagashaa o fashilaysaa arrimaha nocano kale ah inkastoo fahmayo xalada ku gaadaman e halista ah hadana geesinimo ,dhirasho iyo ku dhac ba lo bahayahay ,si aay u cabsadan kuwa caadoqataasha cadaaystay inaay ka xadaan baytul maalka umada ,aakhirana haawli waa danbaaysaa,ifkina waa ku helayaaan ajarkooda inshaALLAH.
Fiiiro gaar. Waxaa la yiri waxad qortid ka firso Igama aha e cebaayn cid aan waxba kasban ee wa iga toosin ,waayo waxaan rabaa inuu dhulkeena kasuulo musuqmaasuqo.